မနျကညျြး သီးကနရေရှိနိုငျတဲ့ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူး ၁၀ ခကျြ – Focus Myanmar
မနျကညျြးသီး ကို ရှေးကတြဲ့ယဉျကြေးတဲ့လူ့အဖှဲ့အစညျးအဆကျဆကျမှာ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ ဟငျးခကျြရာမှာသုံးလေ့ရှိသလို ဆေးဝါးအနနေဲ့လညျးအသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။ မနျကညျြးသီးကို ဟငျးအနှဈအဖွဈခကျပွုတျစားသုံးလေ့ရှိသလို အခဉျြအဖွဈနဲ့လညျးစားသုံးလေ့ရှိပါတယျ။ တခါတရံမှာမနျကညျြးသီးကို ဖြျောရညျအဖွဈနဲ့လညျးသုံးဆောငျလေ့ရှိကွပါတယျ။
ဗိုကျနာနသေလား၊ ဝမျးခြုပျနသေလား၊ မနျကညျြးသီးက ဝမျးဗိုကျနဲ့ပတျသကျတဲ့သညျပွူနာတှအေားလုံးကို ဖွရှေငျးပေးပါလိမျ့မယျ။ ရိုးရာဆေးတှမှောလညျး မနျကညျြးသီးကို ဝမျးနုတျဆေးအဖွဈ အသုံးပွုခဲ့ကွပါတယျ။
မနျကညျြးသီးမှာ တာတရဈ အကျဆဈ၊ မာလဈ အကျဆဈနဲ့ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှပေါဝငျတာကွောငျ့ ဝမျးနုတျဆေး အဖွဈအသုံးပွုကွတာဖွဈပါတယျ။ မနျကညျြးသီးကိုဝမျးခြုပျတာသကျသာစဖေို့အသုံးပွုနိုငျပွီး မနျကညျြးရှကျကိုတော့ ဝမျးလြှောတာကိုသကျသာစဖေို့ အသုံးပွုနိုငျတဲ့အပွငျ မနျကညျြးပငျရဲ့အမွဈနဲ့အခေါကျကိုတော့ ဝမျးဗိုကျပိုငျးနာကငျြတာတှေ သကျသာစဖေို့အတှကျ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ မနျကညျြးသီးက ဝမျးဗိုကျကွှကျသားတှကေို ပွလြေော့သကျသာစတောကွောငျ့ မနျကညျြးသီးကို ဝမျးရောဂါကုသ ရာမှာအသုံးပွုတာဖွဈပါတယျ။ ဝမျးခြုပျနပေါက ညအိပျရာမဝငျခငျမှာမနျကညျြးရညျသောကျသုံးပေးလို့ရပါတယျ။
၂. ဆီးခြိုရောဂါကို သကျသာစခွေငျး
မနျကညျြးစေ့တှကေိုတော့ ဆီးခြိုသမားတှမှော ဆီးခြိုရောဂါသကျသာစဖေို့အတှကျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ မနျကညျြးသီးစေ့အနှဈမှာ ယောငျရမျးမှုကိုလြော့ပါးသကျသာစတေဲ့ဓာတျတဈမြိုးပါဝငျနတောကိုတှေ့ရှိရပါတယျ။ ဒါတငျမကသေးပါဘူး မနျကညျြးသီးအစေ့အနှဈက သှေးတှငျးသကွားဓာတျပမာဏကို တညျငွိမျအောငျထိနျးသိမျး ပေးနိုငျတာကွောငျ့ ဆီးခြိုကွောငျ့ ပနျကရိယတဈသြှူးတှပေကျြစီးမှုကိုလြော့ပါးသကျသာစပေါတယျ။ မနျကညျြးသီး စေ့မှာပါတဲ့ alpha-amylase ကလညျး သှေးတှငျးသကွားဓာတျပမာဏကို လြော့ကစြတေယျလို့တှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။
ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးစလေိုနတေယျဆိုရငျတော့ အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျပွီး အဆီဓာတျမပါဝငျတဲ့ မနျကညျြးသီးကို စားသုံးပေးပါ။ မနျကညျြးသီးမှာ flavonoids နဲ့ polyphenols တို့ပါဝငျတာကွောငျ့ လေ့လာမှု တဈရပျမှာနေ့စဉျမနျကညျြးသီးစားသုံးပေးတာက ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးအောငျအထောကျအကူပွုတယျလို့ တှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။
မနျကညျြးသီးမှာ ကာဗိုဟိုကျဒရိတျတှကေို အဆီအဖွဈပွောငျးလဲပေးတဲ့ အငျဇိုငျးတဈမြိုးဖွဈတဲ့ amylase အငျဇိုငျးထုတျလုပျမှုကို ဟနျ့တားပေးခွငျးအားဖွငျ့စားခငျြစိတျကိုလြော့ပါးစတေဲ့ hydroxycitric အကျဆဈပါဝငျပါတယျ။
၄. အစာအိမျအနာမဖွဈအောငျကာကှယျပေးသလို အနာကိုကုသပေးနိုငျခွငျး
အစာအိမျအနာဆိုတာက အစာအိမျနဲ့အူသိမျတှမှောဖွဈလေ့ရှိတဲ့ နာကငျြတဲ့အနာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ လေ့လာမှု တဈရပျမှာ မနျကညျြးသီးစေ့အနှဈမှာပါဝငျတဲ့ polyphenolic ဒွပျပေါငျးက အစာအိမျအနာတှမေဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျလို့တှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။
မနျကညျြသီးဟာနှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ အထူးကောငျးမှနျတဲ့အသီးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ လေ့လာမှုတဈရပျ မှာတော့ မနျကညျြးသီးမှာပါဝငျတဲ့ flavonoids က ခန်ဓာကိုယျအတှကျအကြိုးမပွုတဲ့ ကိုလကျစထရော LDL ကို ကဆြငျးစပွေီး အကြိုးပွုကိုလကျစထရော HDL ပမာဏကို တိုးတကျစပေါတယျ။ မနျကညျြးသီးထဲမှာပါဝငျတဲ့ flavonoids က သှေးတှငျးအဆီတဈမြိုးဖွဈတဲ့ triglycerides ဖွဈပျေါမှုကိုလညျးကာကှယျပေးပါတယျ။ ပိုတကျဆီယမျဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျတာကလညျး သှေးပေါငျခြိနျထိနျးညှိရာမှာ အသုံးဝငျစပေါတယျ။
မနျကညျြးသီးမှာ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ လေ့လာမှုတဈရပျမှာမနျကညျြးသီးစေ့အနှဈ မှာပါဝငျတဲ့ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးက ပွငျးထနျတဲ့ကြောကျကပျပကျြစီးမှုနဲ့ ကြောကျကပျကငျဆာတှေ ဖွဈပျေါခံစားရနိုငျခွကေိုလြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။
မနျကညျြးရှကျနဲ့မနျကညျြးပငျအကိုငျးတှမှောရောဂါပိုးတှကေိုသစေနေိုငျတဲ့ဓာတျနဲ့ ပိုးမှားတှကေို တိုကျဖကျြနိုငျတဲ့ အစှမျးသတ်တိတှရှေိတာကွောငျ့ နိုငျငံတျောတျောမြားမြားမှာမနျကညျြးရှကျနဲ့မနျကညျြးပငျအကိုငျးတှကေို အနာကကျြ စဖေို့အတှကျအသုံးပွုကွပါတယျ။ အသေးစားအပူလောငျမှုတှခေံစားရပါက အနာပျေါမှာ မနျကညျြးသီးအနှဈကိုအုံပေးလို့ရပါတယျ။
မနျကညျြးသီးကအရပွေားအတှကျအလှနျအကြိုးပွုပါတယျ။ မနျကညျြသီးက နရေောငျခွညျမှာပါဝငျတဲ့ ခရမျးလှနျ ရောငျခွညျကွောငျ့အရပွေားထိခိုကျပကျြစီးတာတှကေို အကာအကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ မနျကညျြးသီးကို မကျြနှာ အရပွေားပျေါက ဝကျခွံတှလြေော့ပါးသကျသာစဖေို့နဲ့ အမာရှတျတှပြေောကျကငျးစဖေို့အတှကျလညျး အသုံးပွုလေ့ ရှိကွပါတယျ။ မနျကညျြးသီးမှာပါဝငျတဲ့ alpha hydroxyl အကျဆဈက ဆဲလျသတှေကေို ဖယျရှားပေးသလို ခြှေးပေါကျတှမှောပိတျဆို့နတေဲ့အညဈအကွေးတှကေိုလညျး ဖယျရှားရှငျးလငျးပေးပါတယျ။ အဆီပွနျတဲ့မကျြနှာအသားအရအေတှကျ မနျကညျြးသီးမကျြနှာပေါငျးတငျဆေးလုပျနညျး ပါဝငျပစ်စညျးမြား
• မနျကညျြးသီးအနှဈ ၂၀ ဂရမျ
• နနှငျးမှုနျ့စဈစဈ လကျဖကျရညျဇှနျး တဈဝကျ
• ရနှေေး လုပျပုံလုပျနညျး
• ရနှေေးထဲကို မနျကညျြးသီးထညျ့စိမျပါ။ မိနဈအနညျးငယျကွာထားပေးပါ။
• မနျကညျြးနှဈထဲကို နနှငျးမှုနျ့ထညျ့ပွီးနှံ့အောငျမှပေါ။
• ရောစပျထားတဲ့ အနှဈကို မကျြနှာမှာနှံ့အောငျလိမျးပေးပွီး ၁၀ မိနဈကနေ ၁၅ မိနဈကွာထားပေးပါ။
အနရေခကျလောကျတဲ့အထိခြောငျးဆိုးနပေါသလား။ မနျကညျြးသီးကိုစားသုံးပေးဖို့လိုနပေါပွီ။ မနျကညျြးသီးမှာ ဓာတျမတညျ့မှုကွောငျ့ဖွဈတဲ့ပနျးနာရငျကပျြဝဒေနာနဲ့ခြောငျးဆိုးတာတှကေို ထိထိရောကျရောကျကုသပေးနိုငျတဲ့ antihistaminic ဂုဏျသတ်တိတှပေါဝငျနပေါတယျ။ မနျကညျြးသီးမှာ ကိုယျခံအားစနဈကိုတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျတဲ့ ဗီတာမငျ စီ ကွှယျဝစှာပါဝငျတာကွောငျ့ အအေးမိတာကို ကာကှယျပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မနျကညျြးသီးက အသညျးကိုလညျးကာကှယျပေးနိုငျပါသေးတယျ။ လေ့လာမှုတဈရပျမှာ အရကျအလှနျအကြှံ သောကျသုံးမှုကွောငျ့ဖွဈပျေါခံစားရတဲ့အသညျးပကျြစီးမှုကို မနျကညျြးရှကျအသုံးပွုပွီး ပွနျလညျကောငျးမှနျလာ အောငျလုပျဆောငျနိုငျတာကိုတှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။ ကယျလိုရီအမြားအပွားပါဝငျတဲ့အစားအစာတှကေ အသညျးကို အဆီဖုံးစနေိုငျပါတယျ။ နောကျလေ့လာမှုတဈရပျမှာတော့ နေ့စဉျမနျကညျြးသီးအနှဈကိုစားသုံးပေးတာက အသညျးအဆီးမဖုံးအောငျကာကှယျပေးနိုငျတယျ၊လို့တှေ့ရှိခဲ့ရပါတယျ။
မနျကညျြးသီးမှာ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျနဲ့ကလေးငယျအတှကျအရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ အပွညျ့အဝ ပါဝငျသလို အမြှငျဓာတျလညျးကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ မနျကညျြးသီးစားသုံးပေးမှုက ဘေးဥပါဒျ မရှိပါဘူး။ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးအနနေဲ့ နေ့စဉျစားသုံးတဲ့အစားအသောကျထဲမှာမနျကညျြးသီးကို ထညျ့သှငျး စားသုံးပေးခွငျးဖွငျ့ ဝမျးခြုပျတာနဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျကာလအတှငျးနံနကျပိုငျးမှာပြို့အနျတဲ့ဝဒေနာကို သကျသာစေ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆရာဝနျနဲ့တော့အရငျတိုငျပငျညှိနှိုငျးသငျ့ပါတယျ။
• မနျကညျြးသီးမှာသှေးကြဲစတေဲ့အစှမျးသတ်တိတှပေါဝငျနတောကွောငျ့အကိုကျအခဲပြောကျဆေးနဲ့အခွား သောသှေးကြဲဆေးတှသေောကျသုံးနတေဲ့သူတှအေနနေဲ့ မနျကညျြးသီးစားသုံးတာမြိုးမလုပျဖို့ အကွံပွုပါ ရစေ။
• စိတျဓာတျကတြာကိုသကျသာစတေဲ့ဆေးဝါးတှနေဲ့မနျကညျြးသီးကခန်ဓာကိုယျတှငျးက ဆီရိုတိုနငျပမာဏကို တိုးစနေိုငျတာကွောငျ့ စိတျကရြောဂါသောကျဆေးတှသေောကျသုံးနတေဲ့အခါမနျကညျြးသီးကိုစားသုံးတာက ဆီရိုတိုနငျ အဆိပျသငျ့မှုကိုဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
• မနျကညျြးသီးသကွားလုံးမှာ အဆိပျဖွဈစနေိုငျလောကျတဲ့ပမာဏအထိ ခဲဓာတျတှပေါဝငျနတေတျတာ ကွောငျ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျတှနေဲ့ကလေးငယျတှအေနနေဲ့ မစားသုံးကွဖို့အကွံပွုလိုပါတယျ။ ခဲဆိပျသငျ့မှုက ပွငျးထနျတဲ့ကနျြးမာရေးထိခိုကျမှုတှကေိုဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
မနျကညျြးသီးကို ကနျြးမာရေးနဲ့အသငျ့တျောဆုံးဖွဈအောငျစားသုံးနညျးကတော့ နေ့စဉျစားသုံးနတေဲ့ ဟငျးလြာတှေ ထဲမှာ မနျကညျြးသီးထညျ့သှငျးခကျြပွုတျတာပဲဖွဈပါတယျ။
မန်ကျည်းသီး ကို ရှေးကျတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအဆက်ဆက်မှာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဟင်းချက်ရာမှာသုံးလေ့ရှိသလို ဆေးဝါးအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကို ဟင်းအနှစ်အဖြစ်ခက်ပြုတ်စားသုံးလေ့ရှိသလို အချဉ်အဖြစ်နဲ့လည်းစားသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတရံမှာမန်ကျည်းသီးကို ဖျော်ရည်အဖြစ်နဲ့လည်းသုံးဆောင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
ဗိုက်နာနေသလား၊ ဝမ်းချုပ်နေသလား၊ မန်ကျည်းသီးက ဝမ်းဗိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သည်ပြဿနာတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရာဆေးတွေမှာလည်း မန်ကျည်းသီးကို ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ တာတရစ် အက်ဆစ်၊ မာလစ် အက်ဆစ်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ဝမ်းနုတ်ဆေး အဖြစ်အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကိုဝမ်းချုပ်တာသက်သာစေဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြီး မန်ကျည်းရွက်ကိုတော့ ဝမ်းလျှောတာကိုသက်သာစေဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် မန်ကျည်းပင်ရဲ့အမြစ်နဲ့အခေါက်ကိုတော့ ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းနာကျင်တာတွေ သက်သာစေဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးက ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့သက်သာစေတာကြောင့် မန်ကျည်းသီးကို ဝမ်းရောဂါကုသ ရာမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းချုပ်နေပါက ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာမန်ကျည်းရည်သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
၂. ဆီးချိုရောဂါကို သက်သာစေခြင်း
မန်ကျည်းစေ့တွေကိုတော့ ဆီးချိုသမားတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါသက်သာစေဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးစေ့အနှစ်မှာ ယောင်ရမ်းမှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး မန်ကျည်းသီးအစေ့အနှစ်က သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်း ပေးနိုင်တာကြောင့် ဆီးချိုကြောင့် ပန်ကရိယတစ်သျှူးတွေပျက်စီးမှုကိုလျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီး စေ့မှာပါတဲ့ alpha-amylase ကလည်း သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို လျော့ကျစေတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေလိုနေတယ်ဆိုရင်တော့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အဆီဓာတ်မပါဝင်တဲ့ မန်ကျည်းသီးကို စားသုံးပေးပါ။ မန်ကျည်းသီးမှာ flavonoids နဲ့ polyphenols တို့ပါဝင်တာကြောင့် လေ့လာမှု တစ်ရပ်မှာနေ့စဉ်မန်ကျည်းသီးစားသုံးပေးတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းအောင်အထောက်အကူပြုတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကို အဆီအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ amylase အင်ဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုကို ဟန့်တားပေးခြင်းအားဖြင့်စားချင်စိတ်ကိုလျော့ပါးစေတဲ့ hydroxycitric အက်ဆစ်ပါဝင်ပါတယ်။
၄. အစာအိမ်အနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးသလို အနာကိုကုသပေးနိုင်ခြင်း
အစာအိမ်အနာဆိုတာက အစာအိမ်နဲ့အူသိမ်တွေမှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နာကျင်တဲ့အနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှု တစ်ရပ်မှာ မန်ကျည်းသီးစေ့အနှစ်မှာပါဝင်တဲ့ polyphenolic ဒြပ်ပေါင်းက အစာအိမ်အနာတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မန်ကျည်သီးဟာနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ရပ် မှာတော့ မန်ကျည်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ flavonoids က ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးမပြုတဲ့ ကိုလက်စထရော LDL ကို ကျဆင်းစေပြီး အကျိုးပြုကိုလက်စထရော HDL ပမာဏကို တိုးတက်စေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ flavonoids က သွေးတွင်းအဆီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ triglycerides ဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကလည်း သွေးပေါင်ချိန်ထိန်းညှိရာမှာ အသုံးဝင်စေပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာမန်ကျည်းသီးစေ့အနှစ် မှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းက ပြင်းထန်တဲ့ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုနဲ့ ကျောက်ကပ်ကင်ဆာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
မန်ကျည်းရွက်နဲ့မန်ကျည်းပင်အကိုင်းတွေမှာရောဂါပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ဓာတ်နဲ့ ပိုးမွှားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေရှိတာကြောင့် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာမန်ကျည်းရွက်နဲ့မန်ကျည်းပင်အကိုင်းတွေကို အနာကျက် စေဖို့အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။ အသေးစားအပူလောင်မှုတွေခံစားရပါက အနာပေါ်မှာ မန်ကျည်းသီးအနှစ်ကိုအုံပေးလို့ရပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးကအရေပြားအတွက်အလွန်အကျိုးပြုပါတယ်။ မန်ကျည်သီးက နေရောင်ခြည်မှာပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်ကြောင့်အရေပြားထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးကို မျက်နှာ အရေပြားပေါ်က ဝက်ခြံတွေလျော့ပါးသက်သာစေဖို့နဲ့ အမာရွတ်တွေပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးမှာပါဝင်တဲ့ alpha hydroxyl အက်ဆစ်က ဆဲလ်သေတွေကို ဖယ်ရှားပေးသလို ချွေးပေါက်တွေမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးပါတယ်။ အဆီပြန်တဲ့မျက်နှာအသားအရေအတွက် မန်ကျည်းသီးမျက်နှာပေါင်းတင်ဆေးလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ
• မန်ကျည်းသီးအနှစ် ၂၀ ဂရမ်
• နနွင်းမှုန့်စစ်စစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
• ရေနွေး လုပ်ပုံလုပ်နည်း
• ရေနွေးထဲကို မန်ကျည်းသီးထည့်စိမ်ပါ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာထားပေးပါ။
• မန်ကျည်းနှစ်ထဲကို နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီးနှံ့အောင်မွှေပါ။
• ရောစပ်ထားတဲ့ အနှစ်ကို မျက်နှာမှာနှံ့အောင်လိမ်းပေးပြီး ၁၀ မိနစ်ကနေ ၁၅ မိနစ်ကြာထားပေးပါ။
အနေရခက်လောက်တဲ့အထိချောင်းဆိုးနေပါသလား။ မန်ကျည်းသီးကိုစားသုံးပေးဖို့လိုနေပါပြီ။ မန်ကျည်းသီးမှာ ဓာတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပန်းနာရင်ကျပ်ဝေဒနာနဲ့ချောင်းဆိုးတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်တဲ့ antihistaminic ဂုဏ်သတ္တိတွေပါဝင်နေပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် စီ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် အအေးမိတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးက အသည်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာ အရက်အလွန်အကျွံ သောက်သုံးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတဲ့အသည်းပျက်စီးမှုကို မန်ကျည်းရွက်အသုံးပြုပြီး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကယ်လိုရီအများအပြားပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေက အသည်းကို အဆီဖုံးစေနိုင်ပါတယ်။ နောက်လေ့လာမှုတစ်ရပ်မှာတော့ နေ့စဉ်မန်ကျည်းသီးအနှစ်ကိုစားသုံးပေးတာက အသည်းအဆီးမဖုံးအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်၊လို့တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ကလေးငယ်အတွက်အရေးပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အပြည့်အဝ ပါဝင်သလို အမျှင်ဓာတ်လည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ မန်ကျည်းသီးစားသုံးပေးမှုက ဘေးဥပါဒ် မရှိပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအနေနဲ့ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအသောက်ထဲမှာမန်ကျည်းသီးကို ထည့်သွင်း စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ဝမ်းချုပ်တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းနံနက်ပိုင်းမှာပျို့အန်တဲ့ဝေဒနာကို သက်သာစေ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့တော့အရင်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်။
• မန်ကျည်းသီးမှာသွေးကျဲစေတဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေပါဝင်နေတာကြောင့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနဲ့အခြား သောသွေးကျဲဆေးတွေသောက်သုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ မန်ကျည်းသီးစားသုံးတာမျိုးမလုပ်ဖို့ အကြံပြုပါ ရစေ။
• စိတ်ဓာတ်ကျတာကိုသက်သာစေတဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့မန်ကျည်းသီးကခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကို တိုးစေနိုင်တာကြောင့် စိတ်ကျရောဂါသောက်ဆေးတွေသောက်သုံးနေတဲ့အခါမန်ကျည်းသီးကိုစားသုံးတာက ဆီရိုတိုနင် အဆိပ်သင့်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
• မန်ကျည်းသီးသကြားလုံးမှာ အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ပမာဏအထိ ခဲဓာတ်တွေပါဝင်နေတတ်တာ ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ မစားသုံးကြဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ခဲဆိပ်သင့်မှုက ပြင်းထန်တဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မန်ကျည်းသီးကို ကျန်းမာရေးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်အောင်စားသုံးနည်းကတော့ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့ ဟင်းလျာတွေ ထဲမှာ မန်ကျည်းသီးထည့်သွင်းချက်ပြုတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Credit: Kumudra မအေးသီမွန်[Ref:curejoy; 26 May 2017]
နွေရာသီမှာ ပိုခံစားရတဲ့ အရိုးအဆစ် ရောင်ရမ်းမှု ဝေဒနာ